Archive du 01-juin-2022
Mamy Ravatomanga Hifanohana sy hifaninana amin-dRajoelina ?
Ny hitsikitsika tsy mandindihy fa ao raha, ary amin’ny politika tsy misy ny kisendrasendra. Raha vao miresaka ny anaran’Atoa Mamy Ravatomanga dia ny tontolon’ny fandraharahana no tena ahafantarana azy,
Ivandry Vaky ny lohan'ilay mpitondra moto
Namono olona indray ny kodiaran-droa na ny moto omaly hariva tetsy Ivandry. Raim-pianakaviana iray tombanana handeha hamonjy fodiana no nifandona tamin'ireny fiarabe mpitatitra mpiasa handeha hody ireny ny moto nentiny.
Naivo Raholdina “Tsy manana olana amin’ireo minisitra aho”
Tontosa omaly teny amin’ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny fifanatonana manaraka amin’ireo minisitera voakasiky ny aditany miverimberina eto Madagasikara.
Antananarivo Mameno fonja ny mpifoka sy mpisera rongony
Lehilahy iray, 43 taona omaly no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny PPA3 Ilanivato rehefa nitazona rongony tao an-tokantranony.
Tsy maintsy hiakatra ny vidin-tsolika Vao mainka hidangana ny vidim-piainana
Nikaonan-doha teny amin'ny Lalam-panjakana Mahazoarivo ny resaka solika omaly talata 31 mey, ary niampita tany amin'ny Fiadidian'ny Repoblika sy ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena.
Oniversiten’Ankatso Lany vatsy ireo mpianatra avy any amin’ny faritra
Nitaraina taty aminay filohan’ny mpianatra avy amin’ireo faritra ny mpianatra mpikaroka mpikambana, hoy ny fampitam-baovaon’izy ireo teny Ankatso omaly.
Madagasikara Olona 8300 isan-taona no matin’ny sigara
Fomba fiaina tsy voafehy mety hahafaty ny fifohana sy fandraisana sigara. Ankoatra ny homamiadan’ny ativava, ny vavony ary ny tsinay mety aterany mantsy rehefa tena be loatra dia mitarika amin’ny fandraisana zava-mahadomelina
Sainam-pirenena Misy refiny tokony arahina
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny volana jona isika manomboka anio alarobia fiandohan’ny volana izay hanamarihana ny tsingerin-taona faha-62 nahazoantsika ny fahaleovantena taorian’ny fanjanahan-tany.